हजारौँ फिट माथि उडिरहेको विमानमा महिलालाई अ’कस्मात् बे’था लागेपछि
हजारौँ फिट माथि उडिरहेको विमानमा महिलालाई अ’कस्मात् बे’था लागेपछि…
बीबीसी । अहिले सम्झिँदा डा. शैलजा वल्लभनेनी आफैँलाई पनि विश्वास लाग्दैन कि उनले जमिनभन्दा हजारौँ फिट माथि उडिरहेको विमानमा एक महिलालाई सु’त्केरी गराइन्। सुत्केरी गराउने बेला विमानमा कैँ’ची, स्या’निटाइजर र पट्टी मात्र उपलब्ध थियो। आकाशमा ज´न्मिएको भारतको सम्भवतः यो पहिलो बच्चा हुनुपर्छ। हुन त बच्चा जन्मिने बेला विमानमा रहेका अरू यात्रीले पनि स’घाएका थिए। उनीहरूले महिला र न’वजात शि’शुका लागि आवश्यक तौ´लिया, प्या´ड र डा’इपर लगायतका सामान उपलब्ध गराए।
सु’त्केरी गराउने क्रममा विमानमा रहेका एकजना प्ला’स्टिक स’र्जनले पनि डा. शैलजालाई स’घाए। बेङ्गलुरुस्थित क्ला’उड ना’इन अस्पतालमा भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ रहेकी डा. शैलजाले बीबीसी हिन्दीसित भनिन्, “मलाई अहिले पनि विश्वास भइरहेको छैन कि मैले त्यसरी सु’त्केरी गराउन सकेँ।” दुई दिनअघि दिल्लीबाट बेङ्गलुरु गइरहेको विमानमा उनले एक महिलालाई सु’त्केरी गराएकी हुन्। उनी भन्छिन्, “विमानहरूमा यस्तो विशेष अवस्थाका लागि ‘बे’सिक प्’रेग्नेन्सी कि’ट’ राख्नुपर्ने हो।” दिल्लीबाट विमान उडेको आधा घण्टापछि एक चिकित्सक चाहियो भनेर विमानमा घो’षणा भयो।
रियादमा प्लास्टिक सर्जनका रूपमा काम गर्दै आएका डा. नागराज सहयोगका अगाडि सरे। डा. शैलजा भन्छिन्, “उनलाई सहयोग चाहिन्छ होला भनेर म विमानको पछाडिबाट उठेर गएँ। साढे सात महिनाकी ग’र्भवतीलाई सहयोग चा’हिएको भनेर चालक दलका सदस्यले मलाई बताए।” सुरुमा ग’र्भवती महिलाले पेट दुखिरहेको बताएपछि डा. शैलजाले ग’र्भ तु’हिएको हुनसक्ने आशङ्का गरिन्। यो’निबाट र’गत ब’गिरहेको छ वा छैन भनेर सोध्दा ती महिलाले सुरुमा छैन भनेकी थिइन्। ग’र्भवती महिला शौ’चालयबाट निस्किरहँदा र’गतका छि’टा देखिएको डा. शैलजाले बताइन्।
उनी ग’र्भवती महिलानजिक पुग्दा शि’शुको टा’उको अ’लिकति बा’हिर नि’स्किसकेको थियो। डा. शैलजा भन्छिन्, “मैले कैँ’ची लिएर त्यसलाई नि’स्सङ्क्रमण गरेँ र शिशुको ना’ल का’टेँ अनि शिशुलाई पट्टीले बे’रिदिएँ।” “त्यसपछि अरू यात्रीहरू विभिन्न सामानसहित सहयोगका लागि अघि सरे अनि मैले शि´शुलाई सफा गरेँ र शिशु सकुशल रहेको सुनिश्चित गरेँ।” डा. शैलजाका अनुसार विमानमा दुइटा सुई (इ’न्जेक्शन) उपलब्ध थियो जसको प्रयोग महिलामाथि गरियो। पछि यो’निबाट र’गत ब’ग्न रो’कियो र सु’त्केरीले शि’शुलाई स्त’नपान गराइन्।
विमानका चालक सञ्जय मिश्रासँग भारतीय वायुसेवामा काम गरिसकेको अनुभव थियो। डा. शैलजा भन्छिन्, “पाइलट मिश्राले हैदराबादमा विमान अवतरण गर्न सकिने मलाई भन्नुभयो। तर शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको भन्दै मैले विमानलाई आ’कस्मिक अवतरण गराउन नपर्ने जानकारी गराएँ।”डा. शैलजाका अनुसार ‘न’र्मल डे’लिभरी’ नभएको भए विमानमा बच्चा जन्माउने उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। आकाशमा शिशु ज’न्माउनुपर्ने आ’पत्कालीन अवस्थाका लागि वि’मानहरूमा ‘आधारभूत प्रे’ग्नेन्सी कि’ट’ राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
डा. शैलजा भन्छिन्, “त्यति बेला विवेकको प्रयोग काम लाग्यो। शिशु र आमाको ज्यान कसरी ब’चाउन सकिएला भनेर मैले सो’च्न थालेँ। र विमानभित्र जे जे उपलब्ध थिए तिनको प्रयोग गरी मैले सु’त्केरी गराएँ।” दश वर्ष महिला रो’ग विशेषज्ञको रूपमा काम गरेकी उनले पछि भ्रू’ण चिकित्सा विशेषज्ञ भएर काम गर्न थालिन्। डा. शैलजा भन्छिन्, “विमानबाट ओ’र्लिएपछि सु’त्केरी र शि’शुलाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याइयो। उपचारमा सं’लग्न चिकित्सकहरूका अनुसार दुवैको स्वास्थ्य अहिले ठिक छ।”